Obi jọrọ Jeremaya ezigbo njọ (1-3a)
Jehova ga-eme ka ndị Juda zaa ajụjụ ihe ha mere (3b-16)
A na-ebere Juda ákwá arịrị (17-22)
Ka onye na-eme ọnụ mewe ọnụ maka na ọ ma Jehova (23-26)
9 A sị nnọọ na isi m bụ mmiri,Anya m abụrụ isi iyi nke na-agbapụta anya mmiri,+M gaara na-ebere ndị obodo anyị e gburu egbu ákwáEhihie na abalị. 2 A sị nnọọ na m nwere ebe ndị njem na-arahụ n’ala ịkpa,M gaara ahapụ ndị obodo m, si ebe ha nọ pụọ, N’ihi na ha niile na-akwa iko.+ Ha niile na-aghọ aghụghọ. 3 Ha na-adị njikere ịgha ụgha otú onye kwere ụta na-adị njikere ịgbapụ akụ́. Ihe juru n’obodo a bụ ụgha. E nweghị onye na-akwụwa aka ọtọ.+ Jehova kwuru, sị, “Ha na-esi n’otu ihe ọjọọ gaa n’ihe ọjọọ ọzọ. Ha ejighịkwa m kpọrọ ihe.”+ 4 “Onye ọ bụla n’ime unu kpachara anya n’ebe onye agbata obi ya nọ,N’ihi na onye agbata obi unu nke ọ bụla bụ onye nkwutọ.+ Unu atụkwasịkwala nwanne unu ọ bụla obi,N’ihi na nwanne unu nke ọ bụla bụ onye aghụghọ.+ 5 Onye ọ bụla na-aghọ onye agbata obi ya aghụghọ. O nweghịkwa onye na-ekwu eziokwu. Ha akụzierela ire ha otú e si agha ụgha.+ Ha na-eji ike ha niile eme ihe ọjọọ. 6 I bi n’etiti ndị aghụghọ. Ha na-aghọ aghụghọ, jụkwa ịmara m.” Ọ bụ Jehova kwuru ihe a. 7 N’ihi ya, Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru, sị: “M ga-agbaze ha, nyochaakwa ha.+ Olee ihe ọzọ m ga-emere ndị m? 8 Ire ha bụ akụ́ e ji agbagbu mmadụ. Ha jikwa ya aghọ aghụghọ. Onye ọ bụla n’ime ha na-eji ọnụ ya agwa onye agbata obi ya na udo dị. Ma n’obi ya, ọ na-agbakọ otú ọ ga-esi zoo chebiri ya.” 9 Jehova kwuru, sị: “Ọ̀ bụ na mụ ekwesịghị ime ka ha zaa ajụjụ maka ihe ndị a? Ka ọ̀ bụ na mụ* ekwesịghị ịta mba dị otú a ahụhụ maka ihe ha na-eme?+ 10 M ga-ebere ugwu dị iche iche ákwá, beekwara ha ákwá arịrị. M ga-abụrụ ala anụmanụ na-ata ahịhịa ndị dị n’ala ịkpa abụ iru uju,N’ihi na a gbaala ha ọkụ. E nweghịzi onye na-esi na ha agafe. A naghịkwa anụ ubé anụ ụlọ na ha. Nnụnụ na anụ ọhịa dị iche iche agbapụchaala na ha. Ha anọghịzi ebe ahụ.+ 11 M ga-eme ka Jeruselem bụrụ ikpo nkume+ na ọgba nkịta ọhịa.+ M ga-emekwa ka obodo ndị dị na Juda tọgbọrọ nkịtị, n’enweghị onye bi na ha.+ 12 È nwere onye ma ihe nke ga-aghọta ihe a? È nwere onye Jehova ji ọnụ ya gwa okwu nke ga-akọ ya? Gịnị mere ala a ji laa n’iyi? Gịnị mere o ji kpọọ nkụ ka ala ịkpa,Nke na e nweghị onye na-esi na ya agafe?” 13 Jehova wee sị: “Ọ bụ n’ihi na ha jụrụ iwu* m nyere ha. Ha edebeghị ya. Ha emeghịkwa ihe m kwuru. 14 Kama, ha kpọrọ ekwo nkụ na-eme ihe dị ha n’obi,+ na-esokwa Bel, otú ndị nna nna ha kụziiri ha ka ha na-eme.+ 15 N’ihi ya, Jehova nke ụsụụ ndị agha, bụ́ Chineke Izrel, kwuru, sị, ‘M ga-eme ka ndị a taa ahịhịa na-elu ilu. M ga-emekwa ka ha ṅụọ mmiri e tinyere nsí.+ 16 M ga-achụga ha ná mba ndị ha na ndị nna nna ha na-amaghị.+ M ga-emekwa ka e jiri mma agha na-achụ ha ruo mgbe m bibichara ha.’+ 17 Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru, sị,‘Chebaranụ ihe na-emenụ echiche. Kpọkọtanụ ụmụ nwaanyị na-abụ abụ iru uju.+ Ziekwanụ ụmụ nwaanyị ndị ọrụ ha bụ ibe ákwá ka ha bịa, 18 Ka ha bịa ọsọ ọsọ beere anyị ákwá arịrị. Ka anya mmiri si anyị n’anya na-asọdata,Ka anya mmiri sikwa ná mbubere anya anyị na-agbapụta.+ 19 A nụrụ ka a na-ebe ákwá arịrị na Zayọn, sị:+ “Ewoo, nke anyị na-eme agwụla! Ihere emegbuola anyị! N’ihi na a chụpụla anyị n’ala anyị, kụtuokwa ụlọ anyị.”+ 20 Ụmụ nwaanyị, nụrụnụ okwu Jehova. Ka ntị unu nụrụ okwu si ya n’ọnụ. Kụzierenụ ụmụ unu ndị nwaanyị otú e si ebe ákwá arịrị a. Ka nwaanyị ọ bụla kụziekwara nwaanyị ibe ya abụ iru uju a.+ 21 N’ihi na ọnwụ esila na windo anyị bata. Ọ batala n’ụlọ elu anyịKa o gbuchapụ ụmụntakịrị anyị n’okporo ámá,Gbuchapụkwa ụmụ okorobịa anyị n’ámá obodo.’+ 22 Kwuo, sị, ‘Jehova kwuru, sị: “Ozu ndị mmadụ ga-awụsa n’ala dị ka nsị anụ,N’enweghị onye ga-ebukọta ha.+ Ha ga-awụsa n’ala ka ùkwù ọka onye na-ewe ihe ubi ka gbutuchara egbutu.”’” 23 Jehova kwuru, sị: “Ka onye ma ihe ghara ịna-eme ọnụ n’ihi ihe ọ ma.+ Ka dike ghara ịna-eme ọnụ n’ihi ike ya,Ka ọgaranya gharakwa ịna-eme ọnụ n’ihi akụnụba ya.”+ 24 “Kama, onye na-eme ọnụ, ya mewe ọnụMaka na ọ ma m, mara ihe gbasara m nke ọma,+Marakwa na ọ bụ mụnwa bụ Jehova, onye na-egosi ndị bi n’ụwa ịhụnanya,* onye na-ekpere ha ikpe ziri ezi, na-egosikwa ha na m bụ onye ezi omume.+ Ọ bụ ihe ndị a na-amasị m.”+ Ọ bụ Jehova kwuru ihe a. 25 Jehova kwuru, sị, “Oge na-abịa mgbe m ga-eme ka ndị niile e biri úgwù, ma, ha aka bụrụ ndị a na-ebighị úgwù, zaa ajụjụ ihe ha mere,+ 26 ya bụ, ndị Ijipt,+ ndị Juda,+ ndị Ịdọm,+ ndị Amọn,+ ndị Moab,+ na ndị niile na-akpụ ajị ndị dị n’akụkụ ntị ha abụọ, bụ́ ndị bi n’ala ịkpa.+ N’ihi na mba ndị a niile bụ ndị a na-ebighị úgwù, ndị Izrel niile bụkwa ndị a na-ebighị úgwù n’obi.”+